Boliiska Melbourne oo toogasho ku dilay nin Soomaali ah oo afduub gaystay – Kasmo Newspaper
Boliiska Melbourne oo toogasho ku dilay nin Soomaali ah oo afduub gaystay
Updated - June 6, 2017 2:59 pm GMT
London (Kasmo), Nin Soomaali u dhashay magaciisana lagu sheegay Yacquub Khayre ayaa ku lug lahaa toogasho ka dhacday dhisme ku yaalla magaalada Brighton ee daafaha Melbourne ee dalka Australia habeenkii Isniinta.
Ninkaas (Sawirka), ayaa la sheegay in uu gabar dhallinyaro ah ku afduubay gurigaas ka hor intii uusan khaarajin nin Shiinees ah oo ilaaliye ka ahaa dhismahaas oo dhalashada Australiya haystay.
Boliiska ayaa ku baxay markii la maqlay rasaasta, waxaana bilaabatay is-rasaaseyn dhexmartay ninkaas iyo Boliiska oo 3 askari ka dhaawacantay, ka hor inta an toogasho lagu dilin.
Waxaa la sheegay haweeneydii uu afduubay ninkaas in ay goobta ka baxsatay iyada oo bad qabta.
Kooxda Daacish ayaa ku sheegatay mas’uuliyadda dhacdada, war ay soo dhigeen Wakaaladdooda wararka Amaq, laakiin Taliyaha Boliska Gobolka Victoria, Graham Ashton, ayaa xaqiijinaya in an wali la hayn xiriirkiisa dibadda, baarisna socoto.
Khayre oo 29 jir ahaa waxaa la sheegay in uu ahaa nin dunuub yaryar oo tuugo ka mid tahay 2012kii u galay xabsiyada dalkaas, laakiin lagu sii daayay damiin bishii Nofembar ee la soo dhaafay.
Sannadkii 2010kii waxaa lala xiriiriyay qorshe weerar argagixiso loogu maleegayay saldhig Militari oo ku yaalla Sidney, laakiin waxaa lagu waayay wax dambi ah.
Jaaliyadda Soomaalida Australia ayaa cambaareeyay dhacdada, waxayna ka muujiyeen walaaca ay ka qabanaa cawaaqibka falalkani ku yeelan karaan nolosha caadiga ah ee dhallinyarada an waxba galabsan iyo magac xumada ay soo jiidi karaan.